महेन्द्रनगर, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका एक व्यक्ति माथी अभद्र व्यवहार - MitiniNews :- Nepali News Portal | Information
Home/विचार/महेन्द्रनगर, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका एक व्यक्ति माथी अभद्र व्यवहार
महेन्द्रनगर । दार्चुलामा बसोबास गर्ने सानु महरा ट्रान्सजेण्डर म्यान हुन । सामाजिक संजाल चलाउने क्रममा उनको भेट एक युवती संग भयो । दिनानुदिन म्यासेन्जरमा बोल्ने र म्यासेज लेख्दै जाने क्रममा उनीहरु दुईमा माया प्रेम बस्दै जान थाल्यो । बिस्तारै उनीहरु दुईमा गहिरो सम्बन्ध स्थापित भयो । महराले माया गरेको साथी हुन गायत्री खत्री ।
उनी महेन्द्र नगरमा बसोबास गदै आएकी छिन् । परिवारले सानै उमेरमा उनको इक्छा बिपरीत बिवाह गरिदिए । उनको छ महिनाको बच्चा पनि छ । सुरुवाती दिनमा खत्रीलाई आफनो यौनिकताको बारेमा थाहा भएन । उमेर बढ्दै जाने क्रममा पनि घर, परिवार र समाजको इज्जतको कारणले चुप लागेर अगाडी बढीरहेको खत्री इक्छा विपरीत विवाह भयो । प्राकृतिक नियम विवाह पछि बच्चा पनि भयो । तर उनले आफ्नो यस सम्बन्धलाई जिवन्त घर, परिवार र समाजलाई गर्न सकिनन । जसरी आफ्नो यौनीकताको बारेमा भन्ने आफ्नो भावना बुझीदिने ब्यक्ति जब उनले पाइन उसैसंग बस्ने उनले निर्णय गरिन । उनले आफ्नो प्रेमीका महरालाई दार्चुलाबाट महेन्द्रनगर आउन आग्रह गरीन उनी आए तर यो समाज माया गर्नेहरुको आखाको तगारो भनेजस्तै भयो । खत्रीको परिवारको दबाबले महरा महेन्द्र नगर आइसक्दै गर्दा डम्मर थापा, मसुरीया कैलालीका प्रहरीले उनलाई हिरासतमा थुन्न पु्गे । उनी त्यस समयमा छक्क परे के भयो कसो भयो उनमा अन्यौलता छायो । कुरा बुझदै जादा गायत्रीको परिवारको उजुरीमा उनलाई थुनामा राखीएको थाहा पाए ।
उता गायत्रीलाई भने परिवारले सानुलाई भेटनमा बन्देज लगाई हाल उनी वोइमेन सेफ हाउसको छत्रछायामा बस्दै छिन । सानुमाथि खत्रीको परिवारले हातपात गर्दा समेत प्रहरी प्रशासन मौन भएर बसीरहेको थियो । आफ्नो अधिकारको लागी बोल्न खोज्दा सानुलाई एउटा निवेदन समेत दिन मानवअधिकारमा बन्देज लगाई हिरासतमा एउटा कैदीको जस्तो व्यवहारमा राखीएको छ । आफ्नो अधिकारको लागी बोल्छु भन्दा उसमाथी ताल्चा लगाएर प्रशासनले राखेको छ । खत्री आफ्नो खुसीले म सानु संग बस्छु भन्दा परिवारले उसमाथी अभ्रद्ध व्यवहार गर्नु त एक थियो प्रशासन समेत रमिते बनिरहेको देख्दा के हाम्रो देशमा न्याय मरेको भान भैरहेको छ । अब खत्री र महरालाई न्याए कसले दिने ? के आफ्नो इक्छाले उमेर पुगेको हकमा संगै बस्ने कानुन देशमा नआएकै हो त ?
के भन्छन बिपीन आफ्नो यौनिक्ताको बारेमा
१३ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०४:३६
एल.जि.बि.टी.आई. ले विशेषगरी पाउनुपर्ने हक, अधिकार र विभिन्न ऐन कानुनका धारा उपधाराबारे एकै आवाजमा